Weekly Eleven ကိစ္စမှာ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေကို မသုံးလို့ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ကန့်ကွက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း Weekly Eleven ကိစ္စမှာ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေကို မသုံးလို့ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ကန့်ကွက်
An officer stand guards beforeavisit by Yanghee Lee (not pictured), the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, at Central Prison Insein in Yangon on June 27, 2016. - Lee is on her fourth visit to Myanmar from June 19 to July 1. (Photo by YE AUNG THU / AFP)
Weekly Eleven ကိစ္စမှာ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေကို မသုံးလို့ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ကန့်ကွက်
သတင်းမီဒီယာဥပဒေကို အသုံးမပြုဘဲ နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)နဲ့ Weekly Eleven ဂျာနယ်လစ်တွေကို တိုက်ရိုက် တရားစွဲဆိုတာဟာ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီပုံရိပ်နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ နစ်နာသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်သည် သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးက ပုဒ်မ (၉)မှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ တာဝန်နဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း ယူဆခဲ့ရင် ရှေးဦးစွာ ကောင်စီကို တိုင်ကြားနိုင်သည်လို့ ပြဌာန်းချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ဖြစ်စဉ်အပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီကို တိုင်ကြားစေလိုကြောင်းနဲ့ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေနဲ့အညီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို တရားစွဲဆိုရာမှာ သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်း မရှိဘဲ တခြားသော ပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုမှုအပေါ်လည်း သတင်းမီဒီယာကောင်စီက ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်ဇောလင်း၊ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးနရီမင်းနဲ့ သတင်းထောက်ချုပ် ကိုဖြိုးဝေဝင်းတို့ကို နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Weekly Eleven ကိစ်စမှာ သတငျးမီဒီယာ ဥပဒကေို မသုံးလို့ သတငျးမီဒီယာကောငျစီ ကနျ့ကှကျ
သတငျးမီဒီယာဥပဒကေို အသုံးမပွုဘဲ နိုငျငံတျော အကွညျညိုပကျြစမှေု ပုဒျမ ၅၀၅ (ခ)နဲ့ Weekly Eleven ဂြာနယျလဈတှကေို တိုကျရိုကျ တရားစှဲဆိုတာဟာ နိုငျငံရဲ့ ဒီမိုကရစေီပုံရိပျနဲ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို ကဆြငျးစတေယျလို့ မွနျမာနိုငျငံ သတငျးမီဒီယာကောငျစီက သတငျးထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။
သတငျးမီဒီယာ ဥပဒပေုဒျမ ၂၁ အရ နဈနာသောဌာန၊ အဖှဲ့အစညျး သို့မဟုတျ လူပုဂ်ဂိုလျသညျ သတငျးမီဒီယာသမားတဈဦးက ပုဒျမ (၉)မှာ ပွဌာနျးထားတဲ့ တာဝနျနဲ့ ကငျြ့ဝတျသိက်ခာ တဈရပျရပျကို ခြိုးဖောကျကွောငျး ယူဆခဲ့ရငျ ရှေးဦးစှာ ကောငျစီကို တိုငျကွားနိုငျသညျလို့ ပွဌာနျးခကျြမှာ ပါရှိပါတယျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့အနနေဲ့ ဖွဈစဉျအပျေါ ပွနျလညျသုံးသပျပွီး သတငျးမီဒီယာ ကောငျစီကို တိုငျကွားစလေိုကွောငျးနဲ့ သတငျးမီဒီယာ ဥပဒနေဲ့အညီ နှဈဦးနှဈဖကျ ပွလေညျအောငျ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျပေးဖို့ လိုအပျကွောငျး ထုတျပွနျခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
သတငျးမီဒီယာသမားတှကေို တရားစှဲဆိုရာမှာ သတငျးမီဒီယာဥပဒနေဲ့ တရားစှဲဆိုခွငျး မရှိဘဲ တခွားသော ပုဒျမတှနေဲ့ တရားစှဲဆိုမှုအပျေါလညျး သတငျးမီဒီယာကောငျစီက ပွငျးထနျစှာ ကနျ့ကှကျရှုတျခထြားပါတယျ။ အယျဒီတာခြုပျ ဦးကြျောဇောလငျး၊ တာဝနျခံအယျဒီတာ ဦးနရီမငျးနဲ့ သတငျးထောကျခြုပျ ကိုဖွိုးဝဝေငျးတို့ကို နိုငျငံတျော အကွညျညိုပကျြစမှေုနဲ့ ဖမျးဆီးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Next articleWaveMoney နဲ့ Ananda တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဖုန်းနဲ့ ငွေပေးချေနိုင်မယ့် အစီအစဉ် စတင် (ရုပ်/သံ)